तपाइँको ईमेल मार्केटि Camp अभियानहरुबाट जोगिन ११ गल्तीहरू Martech Zone
हामी प्राय: ईमेल मार्केटिंगको साथ के काम गर्छौं साझा गर्छौं, तर काम नगर्ने चीजहरूको बारेमा कसरी? ठीक छ, सिटीपोस्ट मेल एक ठोस इन्फोग्राफिक सँगै राख्नुहोस्, १० चीजहरू जुन तपाईले आफ्नो ईमेल अभियानमा समावेश गर्नु हुँदैन यसले तपाईंको ईमेलहरू लेख्दा वा डिजाईन गर्दा के बेवास्ता गर्नेबारे विवरण प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं ईमेल मार्केटि withको साथ सफल हुन चाहानुहुन्छ भने, यहाँ केहि शीर्ष फक्स-पासहरू छन् जब तपाईं आफ्नो ईमेल अभियानमा समावेश नगर्न पर्ने चीजहरूको कुरा आउँछन् भने सावधान हुनुपर्दछ।
तिनीहरूले वास्तवमा ११ प्रदान गरे! के मैले यस सूचीको बारेमा रमाईलो गरें कि यो एल्गोरिदमको बारेमा कम गर्न थियो जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (आईएसपी) प्रयोग र ग्राहक प्रतिक्रिया कस्तो हुने भन्ने बारे अधिक हुन सक्छ। जब तपाईं प्रयोगकर्ताको परिप्रेक्ष्यबाट ईमेल डिजाईन गर्नुहुन्छ, यी सबै अर्थहरूमा हुन्छन्!
धेरै शब्दहरू… - अत्यधिक तपाईंको ग्राहकहरु तपाईंको ईमेल बाट सदस्यता समाप्त गर्न नेतृत्व गर्न सक्दछ। संक्षिप्त हुनुहोस्, लक्ष्यमा हुनुहोस्, र अनावश्यक भोर्बाइज प्रयोग गर्नबाट जोगिनुहोस्।
एक विषय लाइन जुन तपाईंलाई जंक फोल्डरमा देख्नेछ - त्यहाँ निर्दिष्ट शब्दहरू छन् जुन तपाईंको ईमेल सेवा प्रदायकमा सचेतहरू बढाउछ (ESP)। उदाहरण समावेश मुक्त, % बन्द, र अनुस्मारक.
कमजोर साइन-अफ - बुमेराrang्गको एक अध्ययन अनुसार, कृतज्ञता अभिव्यक्तिको परिणामस्वरूप औसत प्रतिक्रिया दरमा% 36% वृद्धि भयो
तपाईको बारेमा धेरै कुरा - सम्भावित ग्राहकहरू तपाईंमा रूचि राख्दैनन्, उनीहरू उनीहरूको लागि तपाईंले के चीजहरू पूरा गर्न सक्नुहुनेछ भन्नेमा उनीहरू रुचि राख्छन्।
भ्रामक विषय पंक्तिहरू - विश्वास सबै डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूको लागि आधार हो, तपाईंको खुला दर बढाउने प्रयास गर्नको लागि तपाईंको व्यवसायलाई जोखिममा नपार्नुहोस्।
कुनै जवाफ पठाउने ठेगाना - उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरू जान्न चाहन्छन् कि उनीहरूले तपाईंको ईमेलहरूमा जवाफ दिन सक्छन्। साइड नोट ... हाम्रो उत्तर ईमेल ठेगाना हो Noreply तर हामी वास्तवमै यसको जवाफ दिन्छौं र यसको जवाफ दिन्छौं!
एउटा ठूलो छवि - कुनै पूर्वावलोकन पाठ र लिंकको साथ केवल एक छविको साथ, तपाईं स्प्यामको रूपमा रिपोर्ट हुन अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ।
टुटेका लिंक - ईमेल खोल्ने जस्ता निराशाजनक केहि छैन, लिंकमा क्लिक गरेर, र केहि पनि हुँदैन। यो सदस्यता रद्द गर्न सब भन्दा द्रुत तरीका हो!
Typos - हामी सबै उनीहरुलाई बनाउँछौं, तर यसले तपाईको विश्वसनियताको मूल्य चुकाउँछ। का लागि साईन अप गर्नुहोस् Grammarly र तपाईं खुशी हुनुहुन्छ तपाईंले गर्नुभयो!
मूल्य बिना सामग्री - केवल ईमेलहरू पठाउन ईमेलहरू पठाउनु एउटा ग्राहक हराउने उत्तम तरिका हो। मान प्रदान गर्नुहोस् र उनीहरू तपाईंको अर्को ईमेलको लागि प्रतीक्षा गर्नेछन्।
कार्य गर्न धेरै धेरै कलहरू - सँधै ईमेलको सन्दर्भमा बेच्नको लागि तपाईंको ग्राहकलाई मूल्य प्रदान गर्दैन। मान प्रदान गर्नुहोस् र कार्यहरू सीमित गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्ना ग्राहकहरू लिन चाहनुहुन्छ।
यहाँ पूर्ण इन्फोग्राफिक छ!
टैग: सामग्री मार्केटिङctaईमेल टुटेको लिंकहरूकार्यको लागि ईमेल कलईमेल सामग्रीईमेल CTAsईमेल छविईमेल साइन-अफईमेल विषय लाइनईमेल टाइपहरूईमेल मूल्यईमेल शब्द गणनाईमेल वर्डकाउन्टकुनै जवाफ ईमेल ठेगानाशब्द गणनाशब्द गणना